कुन कारको मूल्य कति?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कुन कारको मूल्य कति?
भाद्र १४, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — तपाईं कार किन्ने मनस्थितिमा हुनुन्छ ? कुन कार किन्ने ? कस्तो खालको किन्ने ? कति मूल्यको किन्ने ? यी सबै जानकारी पाउन पनि कति ठाउँमा धाउने ? ‘कार किन्दै हुनुहुन्छ भने पहिले आवश्यकता र बजेट यकिन गर्न सल्लाह दिन्छन्,’ नाडा अटो सो–२०१९ का कार्यक्रम संयोजक निराकार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
ग्राहकले आफ्नो बजेटअनुसार कार छान्न सक्छन् नेपालमा । उनका अनुसार नेपाल १६ लाखदेखि करिब ४ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने कारहरू उपलब्ध छन् । त्यसमा अहिले करिब ४० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने मिडल रेन्जका कार मन पराउने बढी छन् ।’ उनका अनुसार इन्ट्री लेभल ए सेगमेन्ट, बी,सी, डी र एसयूभी सेगमेन्टमा वर्गीकरण गरिएको छ । उनी भन्छन्, ‘कारको मूल्य र यसको विशेषताका आधारमा हामीले ५ क्याटेगोरीमा छुट्ट्याएका हौं ।’ जसमा इन्ट्री लेभल र बी सेगमेन्टका सवारी साधन रुचाइएको छ । उनका अनुसार १५ लाखदेखि करिब ४ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने कार नेपालमा छन् ।
उनले उपभोक्तालाई सजिलो होस् भनेर नाडा (अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल) ले हरेक तीन–तीन महिनामा मूल्यसूची निकाल्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘संस्थाले मूल्यसूची निकाल्ने गर्छ । यसबीचमा केही गाडी कम्पनीले मूल्य बढाएका हुन सक्छन् ।’ विभिन्न कम्पनीले विभिन्न छुट तथा सुविधासहित आफ्ना गाडीहरू बिक्री तथा बुकिङ गरिरहेका छन् । मेलामा सवारी हेर्ने, छान्ने र बुकिङ गर्ने काम त हुन्छ नै। सर्वप्रथम आफ्नो आवश्यकता र बजेटअनुसारको सवारी साधनबारे जानकारी पहिल्यै राखेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:५९
चमक गुमाउँदै कृष्णनगर
पूर्वाधार तयार भए पनि कृष्णनगर भन्सारबाट तेस्रो मुलुकसित व्यापार अनुमति नहुँदा भैरहवा र नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता
भाद्र १४, २०७६ मनोज पौडेल
(कपिलवस्तु) — आवश्यक पूर्वाधार तयार भए पनि कृष्णनगर नाकाबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार सञ्चालन नहुँदा व्यवसायी ठूलो मर्कामा परेका छन् । मुलुकका ठूला भन्सार नाकामध्येको भए पनि यहाँबाट तेस्रो मुलुकका सामान आयात गर्न व्यवसायीले भैरहवा र नेपालगन्ज नाका प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यहाँबाट भैरहवा ७० र नेपालगन्ज १८० किलोमिटरको दूरीमा छन् । स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले तेस्रो मुलुकसित सिधै व्यापार सुविधाका लागि माग गरे पनि पूरा भएको छैन । ‘तेस्रो मुलुकसित व्यापार गर्न सडक पहुँच र पूर्वाधार तयार छन्,’ कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार गुप्ताले भने, ‘व्यवसायी पनि इच्छुक छन् ।’ यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गरे पनि सरकारी प्रयास नहुँदा सम्भव नभएको उनले बताए ।
संघले सरकारलाई दबाब दिन दुई साताअघि कृष्णनगर भन्सार र जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ‘के कारणले हो सरकारले ध्यान दिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘दलीय पहुँच नपुगेर होला ।’ तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि सीमाबाट पाँच सय मिटर दूरीमा ब्रोडगेज रेल सेवा सञ्चालनमा छ । त्यहाँबाट भारतका ठूलठूला सहर र बन्दरगाहसम्म रेलको पहुँच छ ।
०५२ सालसम्म यहाँबाट तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार हुन्थ्यो । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका कारण असुरक्षा बढेपछि नाकालाई भारतसँगको व्यापारमा सीमित गरियो । स्थानीय व्यापारी तथा उद्योगीले यसलाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पनि उपयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कृष्णनगर आउने नेता, मन्त्री र प्रशासकसँग उनीहरूले यही कुरा उठाउँदै आएको उद्योगी नन्दकिशोर शर्माले बताए ।
उनका अनुसार ०५०/५२ सम्म कृष्णनगरको व्यापार फस्टाएको थियो । त्यसपछि मुलुकमा द्वन्द्व सुरु भयो । विदेशी सामानका लागि यहाँ आउने भारतीय ग्राहक उतै केन्द्रित भए । यता आउन छाडे । बिस्तारै व्यापार सुक्दै गयो । अहिले बिरानो बनेको छ । कृष्णनगरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने हो भने तेस्रो मुलुकको व्यापार ब्युँताउनुबाहेक विकल्प नभएको उद्योगी जितेन्द्र गोयलले बताए ।
यहाँ नेपाल र भारतको भन्सार कार्यालयबीच दुई सय मिटरको दूरी छ । बढनीस्थित भारतीय कस्टमलाई तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारको भन्सार गर्न पाउने अधिकार छ । कृष्णनगर भारतीय राष्ट्रिय रेल सञ्जालसित जोडिएको छ । बढनीबाट कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, लखनउ र इलाहावादसम्म ब्रोडगेज रेल छुटछन् । बढनी नमुना रेल स्टेसन हो । त्यहाँ रेल धुने वासिङ पिट छ । त्यो भारतीय राष्ट्रिय राजमार्गमा पनि जोडिएको छ । त्यहाँ नेपाली यात्रुलाई लक्षित गरी आवासीय सुविधासहितको बहुउद्देश्यीय भवन छन् । ब्रोडगेज रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष भइसक्यो । कृष्णनगरमा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ । यहाँबाट २० किलोमिटर उत्तर पूर्वपश्चिम राजमार्ग छ । त्यहाँसम्म कालोपत्रे सडक रहेको छ ।
अहिले बढनी पश्चिमबाट भारत आवतजावत गर्ने प्रमुख नाका हो । यहाँबाट मुलुकका धेरै स्थानमा बस सेवा सञ्चालित छ । बढनी बजारमा भारतले इमिग्रेसन अफिस स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कृष्णनगर–चन्द्रौटा नयाँ औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास भइरहेको छ । यहाँ ठूलठूला आठवटा सिमेन्ट र एउटा छड उद्योग बनिसकेका छन् । थप पाँच ठूला उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । एक दर्जनभन्दा बढी साना उद्योग छन् । सुविधा सम्पन्न होटल छन् । तीनतारे होटल निर्माणाधीन छन् । ‘सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा छ,’ कपिलवस्तु व्यापार संघका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले भने, ‘यहाँबाट तेस्रो मुलुक व्यापार व्यवसाय भए सबैलाई सजिलो हुने थियो ।’
रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । विकासमा पछि परेको यस क्षेत्रको कायापलट हुने उनले बताए । यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउनेछ । तेस्रो मुलुकमा व्यापार सुविधा दिए यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै बढनीको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने बढनी व्यापार मण्डलका अध्यक्ष कन्हैया मित्तलले बताए ।
पूर्वाधार भएकाले यहाँबाट तेस्रो मुलुक व्यापारको सम्भावना प्रशस्त छ । पहल नहुँदा गति लिन नसकेको स्थानीय मिर्जा अरसद बेगले बताए ।
अहिले झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगन्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर भन्सार नाका तेस्रो मुलुकसँग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले एउटा परिपत्र गरेको छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखा प्रमुख तर्कराज भट्टले भने, ‘नेपालका सात नाकालाई मात्रै तेस्रो मुलुकमा व्यापार व्यवसायको अधिकार दिइएको छ ।’
त्यसले समस्या भएको उनले बताए । स्थानीयस्तरबाट मन्त्रालयसम्म माग नआएको उनको भनाइ छ । ‘माग आए त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो खुल्ने थियो,’ उनले भने, ‘केही समय लाग्न सक्छ । नहुने भन्ने छैन ।’
कृष्णनगरलाई भारतका पश्चिमी बन्दरगाहसँग जोड्ने हो भने ठूलो लगानीबिनै यसलाई उपयोग गर्न सकिने प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्र कनौडियाले बताए । उनका अनुसार यो नाकालाई तेस्रो मुलुक व्यापारमा उपयोग गर्न सकिने तीन सम्भावना छन् । पहिलो, नेपाललाई भारतको कुनै पश्चिमी समुद्री बन्दरगाहसँग जोड्नु रहेको छ । दोस्रो, यसअघि कृष्णनगरसँगै जोडिएको भारतको बढनी स्टेसनबाट गुजरातको मुन्द्रा आसपाससम्म रेल सेवा सञ्चालनमा रहेकाले थप लगानी गर्नु पर्दैन ।
मुन्द्रामा बन्दरगाह छ । तेस्रो, यहाँ पूर्वाधार तयार भइसकेकाले तत्कालै कृष्णनगरबाट व्यापार सुरु गर्ने सम्भावना छ । गत माघ २४–२५ मा पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले धान्द्रा र मुन्द्रा दुवै बन्दरगाहको विषय उठाएको थियो । नेपालले तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावप्रति भारत सकारात्मक देखिए पनि निर्णय भने भएन । कृष्णनगरलाई मुन्द्रासँग जोडदा कपिलवस्तु, बाँके, दाङलगायत क्षेत्रलाई व्यापारिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । छिमेकमा भारत उत्तरप्रदेशको सिद्धार्थनगर जिल्ला रहेको छ । बढनी बजारबाट गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह करिब १ हजार ६ सय ६५ किमि पर छ ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:५०
बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएको देखेर नआत्तिनुहाेस् : अर्थमन्त्री खतिवडा
सुन अनुगमनका कर्मचारीको बयान सुरु
विराटनगर आईसीपी र आवास परियोजना, ओली–मोदीबाट उद्घाटन आज
सुरेशराज न्यौपाने, देवनारायण साह
तल्लो मोदीको उत्पादन मिति अन्योल
गैरकृषि पेसामा महिलाको पहुँच बढ्दै
७४२ मेगावाटको तमोर आयोजना निर्माणका लागि समझदारी